​अफगानिस्तानमा बम विस्फोट, दुई प्रहरीको मृत्यु
न्यूजलय बुधबार ११, असोज २०७४
अफगानिस्तान । अफगानिस्तानको पश्चिमी प्रान्त हेरातमा सडक किनार बम विस्फोट हुँदा दुई प्रहरीको मृत्यु भएको छ । त्यसैगरी, सोही विस्फोटमा परी अन्य दुई घाइते भएका छन् ।
आतङ्ककारी समूहले सडकमा राखेको बमलाई प्रहरीको सवारीसाधनले कुल्चिँदा उक्त घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
​साउदीका महिलाले अब गाडि चलाउन पाउने
काठमाडौं । साउदी अरबका महिलाले अब सवारी साधन चलाउन पाउने भएका छन् । यस अघि साउदी अरबमा महिलालाई गाडी चलाउन बन्देज गरिएको थियो । साउदी अरेबियाका राजा सलमानले महिलालाई गाडि चलाउन दिने आदेश जारी गरेका छन् ।
महिलाले गाडि चलाउन नपाउने विश्वको....
म्यानमारमा हिन्दुहरुको चिहान फेला, २८ वटा शव भेटिए
न्यूजलय मङ्गलबार १०, असोज २०७४
म्यानमार । म्यानमारको रखाइन प्रान्तको एबक्या गाउँमा हिन्दुहरुको चिहान फेला परेको छ । सेनाले सोमबार उक्त गाउँमा २८ वटा शव फेला पारेको हो ।
फेला परेको शवमध्ये २० वटा शव महिलाको रहेको सेनाले बताएको छ । म्यानमार सुचना कमिटिले रखाइन प्रान्तका अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिम....
​पटाका कारखानामा विस्फोट, आठजनाको मृत्यु
न्यूजलय सोमबार ०९, असोज २०७४
नयाँदिल्ली । पूर्वी भारतीय राज्य झारखन्डमा रहेको पटाका कारखानामा आगलागी हुँदा आठ जनाको मृत्यु भएको छ भने २५ जना घाइते भएका छन् ।
गैरकानूनी रुपमा सन्चालनमा रहेको यस कारखानामा सोमबार आगलागी भएको हो । प्रहरीले घट्ना बारे विस्तृत विवरण भने दिएको छैन । उक्त....
दुबई जाँदै हुनुहुन्छ ? नगर्नुहोस् यी काम
दुबईमा सरकारी अधिकारीले एक बेलायती नागरिकलाई कथित ‘आक्रामक व्यवहार’का कारण गिरफ्तार गरेका छन् । बेलायती नागरिक जामिल अहमद मुकद्दमको दोष यो थियो कि, उनले आफ्ना ड्राइभरलाई औंला देखाएका थिए ।
यदि मुकद्दमलाई दुबईको कानून थाहा हुन्थ्यो भने उनी गिरफ्तार हुनबाट बच्न सक्थे । दुबईमा....
जापानमा बस दुर्घटना हुँदा १० नेपाली घाइते
जापान । जापानमा आइतबार साँझ बस दुर्घटना हुँदा दस जना नेपाली घाइते भएका छन् । घाइते मध्ये पाँच जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ ।
घाइते हुनेमा रुपन्देहीका मीना केसी र मीना श्रीश मगर, बाग्लुङकी लक्ष्मी चालिसे सुवेदी, रितुरमणपाल दर्नाल र कमला नेपाली रहेका....
​बलात्कारको आरोपमा अर्का धर्मगुरु पक्राउ
न्यूजलय आइतबार ०८, असोज २०७४
काठमाडौं । बलात्कारको आरोपमा फेरि अकौ एक धर्म गुरु पक्राउ परेका छन् । बलात्कारकाण्डले भारतमा जेल सजाय भोगिरहेका गुरु गुरमित रामरहिमको चर्चा सेलाउन नपाउँदै भारतकै अर्का धर्मगुरु पक्राउ परेका हुन् । भारतको राजस्थानका प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु पलहरि महराज बलात्कारको अरोपमा पक्राउ परेका हुन् ।
​महिलालाई होच्याएर प्रवचन दिने धार्मिक नेतामाथि प्रतिबन्ध
न्यूजलय शनिबार ०७, असोज २०७४
काठमाडौं । साउदी अरबमा एक धार्मिक नेताले महिलाहरुमाथि विभेदजन्य भाषण दिएका छन् । फलस्वरुप उनको प्रवचनलाई रोक लगाइएको छ । महिलाहरुको एक चौथाइ मात्र दिमाग हुने भन्दै गाडी चलाउन रोक लगाउनुपर्ने प्रवचन दिएपछि धार्मिक नेता साद अल हिजरीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।
‘मारिया’ नामक समुद्री आँधीमा परी १५ जनाको मृत्यु
न्यूजलय शुक्रबार ०६, असोज २०७४
डोमिनिका । मारिया नामक समुद्री आँधीमा परेर डोमिनिकामा करिब १५ जनाको मृत्यु भएको छ । सोही आँधीमा परी अन्य २० जना बेपत्ता रहेको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
क्यारेबियन क्षेत्र क्षति र्पुयाउँदै अघि बढेको सो आँधी क्याटेगोरी चारको रहेको बताइएको छ । डोमिनिका पुगेको....
म्यान्मारका लडाकुको विरोध गर्नेको फेसबुक अकाउन्ट बन्द
न्यूजलय बिहीबार ०५, असोज २०७४
काठमाडौं । फेसबुकले म्यान्मारमा रोहिंग्या मुसलमानहरूमाथि भइरहेको हिंसाका बारेमा सोसल मिडियामा बढाईचढाई गरेर पोस्ट गर्ने व्यक्तिहरूको अकाउन्ट बन्द गर्न थालेको छ । यसको जानकारी भने फेसबुकका प्रवक्ता रुचिका बुधराजाले दिएका छन् ।
उनले भने, ‘‘हामी चाहन्छौं फेसबुक एउटा त्यस्तो प्लेटफर्म हो, जहाँ मानिसहरू पूर्ण....
​१८ गतदेखि त्रिभुवन विमानस्थलमा रातिका उडान बन्द हुने, यस्तो छ कारण
​विप्लव खोज्दै नेपाली सेना गाउँ पस्यो
आज साफ महिला फुटबलको सेमिफाइनल : नेपाल–श्रीलंका र भारत–बंगलादेश भिड्दै
​होली खेल्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
​२०७५ चेत्र ६ गते बुधबारको राशिफल